Ngaba uJohn Cleese Umbhali weNcwadi eMelika?
Kuphi na Kwiindaba
Isaziso sikaJohn Cleese sokuKhutshwa koBu-Independence
Ngaba "i-Monty Python" I-Alumnus Ngokwenene Umbhali Lo Ileta eMelika?
Nantsi intlobo yesithandabuzo esithandwayo esithi "I-Notice of Revocation of Independence" egunyazwe yiMonty Python alumnus uJohn Cleese.
Le yinto enye yenguqu ye-viral ehamba phambili kwi-Intanethi ukususela ngoNovemba 2000. Nangona igalelo layo kuCleese, akazange akhalile, kwaye akazange akhiphe. Unokuqhathanisa iinguqu ezahlukeneyo zetekisi uze ulandele imbali ye-Internet hoax ukuze uthole imvelaphi engaphezulu.
Isampuli sikaJohn Cleese Letter
Nantsi umbhalo we-imeyile uncediswe ngumsebenzisi we-AOL ngomhla kaJan 27, 2005:
I-John Cleese Letter e-USA
Kubemi baseUnited States of America: Ngenxa yokungaphumeleli kwakho ukukhetha uMongameli wase-USA ofanelekileyo kwaye ngoko ulawula ngokwenu, sinika isaziso sokukhutshwa kokuzimela kwakho, kusebenza namhlanje.
Uzuko lweNkosana uElizabhete uElizabeth II uya kuphinda asebenze imisebenzi yamandla kwiindawo zonke, ii-commonwealth kunye nezinye iindawo. Ngaphandle kwe-Utah, engayithandiyo. Unkulumbuso wakho omtsha (Ohloniphekileyo u-Tony Blair, iPhalamende ye-97.85% oye waqaphela ukuba kukho ilizwe ngaphandle kwemida yakho) uya kukhetha umphathiswa waseMelika ngaphandle kwesidingo sokhetho olongezelelweyo. ICongress kunye neSenate iya kuhluthwa. I-questionnaire iya kuhanjiswa ngomnyaka ozayo ukuqinisekisa ukuba ngaba nawuphi na ophawulayo. Ukunceda ekutshintsheni kwi-British Crown Dependency, le mithetho ilandelayo ifakwe ngokukhawuleza:
1. Kufuneka ukhangele ukukhutshwa kwi- Oxford English Dictionary . Emva koko khangela i-aluminium. Khangela isikhokelo sokubiza. Uza kumangaliswa ngendlela ephosakeleyo ngayo. Incwadi ethi "U" iya kubuyiselwa ngamagama athi "ukuthanda" kunye "nommelwane"; ukunqumla incwadi ethi "U" ayikho into engeyonto kunokuba uvila kunxalenye yakho. Ngokufanayo, uya kufunda ukupela "donut" ngaphandle kokudlula ihafu yileta. Uya kugqiba umtshato wakho kunye neleta "'Z' '(eyaziwayo' 'zed' 'ayiyi' 'yee' ') kwaye isisombululo eso siya kutshintshwa yi-suffix u. Uya kufunda ukuba isixande "'burgh' 'sichazwa"' burra 'umz. U-Edinburgh. Uyakwamkela ukuhlonipha iPittsburgh ngokuthi "'Pittsberg' 'ukuba awukwazi ukuhlangabezana nokuchaneka kokuchanekileyo.
Ngokuqhelekileyo, kufuneka ukhulise isigama sakho kumazinga avumelekileyo. Khangela i sigama. Ukusebenzisa amagama angamashumi amabini anesibhozo afakwe kwiimvalo ezinjenge-"like" kwaye "uyazi" yindlela engamkelekanga kunye nefanelekileyo yokunxibelelana. Khangela up interspersed. Ngeke kubekho ukulala ebonini laseJerry Springer. Ukuba awukudala ngokwaneleyo ukujamelana nolwimi olubi, ngoko akufanele ube neengxoxo zengxoxo. Xa ufunda ukuphuhlisa isigama sakho, ngoko awuyi kusebenzisa ulwimi olubi kaninzi.
2. Akukho nto injenge "US English." Siya kukwazisa iMicrosoft egameni lakho. I-Microsoft-spell-checker iya kutshintshwa ukuba ilandele i-imeyili ebuyisiwe "'u"' kunye nokupheliswa kwe-.
3. Kufuneka ufunde ukuhlukanisa iziNgisi kunye ne-Australia. Ngokuqinisekileyo akunjalo. Izivakalisi zesiNgesi azikhawulelwanga kwi-cockney, i-twit ephezulu okanye iMancunian (iDaphne kwiFrasier). Kuya kufuneka ukuba ufunde indlela yokuqonda ukuvakaliswa kweengingqi - iidrama zaseScotland ezifana neTaggart aziyi kusasazwa ngemibhalo engezantsi. Ngethuba sithetha ngeemimandla, kufuneka ufunde ukuba akukho ndawo efana neD Devonshire eNgilani. Igama lenkampani nguDonon. Ukuba uyaphikelela ekubizeni iDononshire, onke amazwe aseMelika aya kuba yiintsika ezinjenge-Texasshire, Floridashire, eLouisanashire.
4. I-Hollywood izakufuneka ngezinye iinkhathi ukuqhuba abadlali beNgesi njengabafana abalungileyo. I-Hollywood iyakufuneka ukuba i-English actors idlale abalingisi beNgesi. Ama-sitcoms aseBrithani anjengokuthi "Amadoda Ahamba Ngokubi" okanye "Alubomvu" awayi kuphinda aphandwe kwaye atyelwe phantsi abaphulaphuli abanomdla waseMelika abangakwazi ukujamelana nokuhleka kwexesha lokungalungi kwezopolitiko.
5. Ufanele uhlolisise ingoma yesizwe sokuqala, "UThixo ugcine uMongameli", kodwa emva kokusebenza ngokupheleleyo 1. Singafuni ukuba udideke uze ulahlekelwe ngaphesheya.
6. Kufuneka uyeke ukudlala ibhola lebhola laseMerika . Kukho uhlobo olunye lwebhola. Oko ubhekisela kuyo njengebhola lebhola laseMelika akuyona umdlalo omhle kakhulu. I-2.15% yakho owaziyo ukuba kukho ilizwe ngaphandle kwemida yakho ingaqaphela ukuba akukho mntu udlala ibhola lebhola laseMerika. Awusayi kuvunyelwa ukuba uwudlale, kwaye kufuneka ufune ukudlala ibhola elifanelekileyo. Ekuqaleni, kuya kuba ngcono ukuba udlala kunye namantombazana. Umdlalo onzima. Labo abanenkalipho ngokwaneleyo, ngokuhamba kwesikhathi, baya kuvunyelwa ukuba badlale ibhola yombhoxo (efana ne-American "ibhola lebhola" kodwa engabandakanyi ukuyeka ukuphumla yonke imizuzwana engamashumi amabini okanye ukugqoka iinqwelo zomzimba ze-kevlar njengeemali). Sithemba ukuhlangana kunye ubuncinane ne-US Rugby icala elisixhenxe ngo-2005. Kufuneka uyeke ukudlala i-baseball. Akunangqiqo ukusingatha isiganeko esibizwa ngokuba yiChungechunge lwehlabathi lomdlalo ongadlali ngaphandle kweMelika. Ukususela ngo-2.15% kuphela owaziyo ukuba kukho ilizwe elingaphaya kwemida yakho, impazamo yakho iyaqondakala. Endaweni yebhola, uya kuvunyelwa ukuba udlale umdlalo wamantombazana obizwa ngokuba ngumgca, okwibhola yebhola ngaphandle kweqhinga leqela, ama-gloves agqithiseleyo, amakhadi okuqokelela okanye ama-hotdog.
7. Awusayi kuvunyelwa ukuba ube ngumnini okanye uphathe izibhamu. Awusayi kuvunyelwa ukuba ube neyakho okanye uphathe into eyingozi ngaphezu koluntu kunemifuno ye-peeler. Ngenxa yokuba asikholelwa ukuba unengqiqo ngokwaneleyo yokusingatha izinto ezinokuthi ziyingozi, uya kufuna imvume xa ufuna ukuhambisa i-peeler yemifuno kuluntu.
8. I-4 kuJulayi ayisasekho iholide kawonkewonke. NgoNovemba wesi-2 iya kuba yeholide entsha yelizwe, kodwa kuphela eNgilani. Kuya kuthiwa yi-Indecisive Day.
9. Zonke iimoto zaseMerika ziyavalwa. Ziyaqhwaba kwaye kukuhle. Xa sikubonisa iimoto zaseJamani, uya kuqonda oko sithethayo. Zonke iindlela zokungqubana zendlela ziza kutshintshwa. Uza kuqala ukuqhuba ukuhamba ngekhohlo ngokukhawuleza. Ngexesha elifanayo, uya kuhamba ngeetrikrikhi kunye neetafile zokuguqula kunye nokuguqula. I-roundabouts kunye neetrikhiya ziya kukunceda uqonde ukuqonda kwamaBritish.
10. Uya kufunda ukwenza ii-chips zangempela. Ezi zinto ozibiza ngokuba yiFries zaseFrench azikho ii-chips zangempela. AmaFries awanaso isiFrentshi, angamaBelgium nangona u-97.85% wakho (kubandakanywa nomfana ofumene i-fries ngoxa eYurophu) abazi ilizwe elibizwa ngeBelgium. Ezi zinto uzigxekayo ekubizeni ii-potato chips zibizwa ngokufanelekileyo ngokuthi i-crisps. Iimvumba zangempela zinqunyiwe kwaye zinyanyisiwe kwioli yezilwanyana. Ukuqhutyelwa kwendabuko kwi-chips ibhiya ekufuneka ihanjiswe ngokufudumeleyo kunye nesicatyambo. Abadibanisi baya kuqeqeshwa ukuba babe nobudlova nabathengi.
11. Njengomqondiso wesiphelo, ama-gram e-5 yolwandle yetyuwa ngekomityi nganye iya kufakwa kuwo wonke ama-tea eyenziwe ngaphakathi kwi-Commonwealth yaseMassachusetts, le nto iphindwe kabini ukwenzela itiye eyenziwe kwisixeko saseBoston ngokwawo.
12. Izinto ezinqabileyo ezingabonakaliyo ozigxekayo ekubizeni ubhiya akuyona into ebaluleke kunayo yonke ibhiya, yilala. Ukususela ngoNovemba-1, kuphela iBritish Bitter efanelekileyo iya kubhekiselwa kubhiya, kunye ne-European brews yeprovenance eyaziwayo neyakwamkelwayo iya kuthiwa yiNgxowa-mali. Izinto eziye zaziwa ngokuba yi-American Beer ziza kubhekiselwa kwi-Urine yase-Near-Frozen yase-Urat, ngaphandle kwemveliso ye-American Budweiser inkampani leyo leyo iya kubhekiselwa kuyo njenge-Urin Uran Urinekile. Oku kuya kuvumela i-Budweiser yangempela (njengoko yenziwe iminyaka eyi-1000 edlulileyo ePilsen, eCzech Republic) iya kuthengiswa ngaphandle kwengozi yokudideka.
Ukususela ngoNovemba-10, i-UK iya kuhambelana namaxabiso epetroli (okanye i-petroli, njengoko uya kuvunyelwa ukuqhubeka ubiza ngo-Apreli 1, 2005) kunye ne-former US. I-UK iya kuhambelana namaxabiso ayo kwalabo base-USA base-USA kunye nabangaphambili baseU.SA, ngokuqinisekileyo, baya kwamkela amaxabiso epetroli ase-UK (malunga ne-6 / US gallon).
14. Uya kufunda ukulungisa iingxaki zomntu ngaphandle kokusebenzisa izibhamu, oommeli okanye oogqirha. Inyaniso oyifunayo amagosa amaninzi kunye nabagqirha ibonisa ukuba awukho mdala ngokwaneleyo ukuba uzimelele. Izibhamu kufuneka zenziwe kuphela ngabantu abadala. Ukuba awukho mkhulu ngokwaneleyo ukulungisa izinto ngaphandle kokumangalela umntu okanye ukuthetha nomgqirha, ngoko awukhulanga ngokwaneleyo ukuphatha isibhamu.
15. Nceda usitshele ngubani owabulala iJFK . Kuye kusiqhubhisa sidenge.
Abaqokeleli berhafu abavela kuRhulumente kaKumkani wakhe baya kuba nani ngokukhawuleza ukuqinisekisa ukufumana yonke imali efunyenweyo (emva kowe-1776).
Ndiyabonga ngokubambisana kwenu kwaye ninomhla omkhulu.
IiNdawo zangasese zikaJohn Dillinger kunye ne-Smithsonian
UBrad Pitt Ngomfazi Wakhe: "Imfihlo Yothando"
Ngaloo nto kunye noRichard Gere kunye neGerbil ...
Ngaba uMaya Angelou Wabhala Inkondlo Ngeenkampani Zamabala?
Tupac Uphilileyo? Internet Hoax
Ngaba uMarta wayenomhlengikazi waseVietnam?
UDonald Trump kunye noMSamariya olungileyo
UCaptain Kangaroo noLee Marvin, amaBar Buddies?
Ngaba U-Eminem Wafa Ngengozi yeCar?
Iingoma eziphezulu zeEddie Money ze '80s
'I-Web's Charlotte' Isishwankathelo
Izibonelelo zabafundi abaneemfuno ezizodwa
Yintoni Umceli Oyisigqeba Esibukhali?
Ngubani owayeseNeil Armstrong?
I-Admissions yaseYunivesithi yaseGallaudet
I-Adaculata University Admissions
Indlela Yokubala Ipesenti
Umkhankaso wePamphlet Campaign
Kuthetha Kanjani Ukungahloneli UThixo?
Inqaku lesiFrentshi elithi 'À Condition Que' lithatha inxaxheba
I-Florida Georgia Line Biography
I-$ 250 Neiman Marcus Cookie Recipe
I-Sephardic Charoset Recipe yePasika
Ukuthetha ngokuthe ngqo Inkcazo kunye nemizekelo
AbaGalati 4: Isahluko seSahluko seBhayibhile
Imbali emfutshane yeTeyi yeGalofu
Uninzi lwaBasebenzi luyinqobisa kwiiKhenketho zeMidlalo
Iindlela ezili-10 zokunciphisa uxinzelelo lweKholeji
UFrederick Douglass: Ikhoboka likaMkhoboka kunye neNkokeli yokuThobala